-भुवन पाठक / पर्थ, अस्ट्रेलिया आफूले माया गरेको मान्छेबाट माया पाउने हरेक मानिसमा चाहना हुन्छ । त्यस्तै असिमित चाहनाहरु थिए म भित्र पनि । यसै क्रममा उनिसँगको मेरो भेट र हाम्रो सामिप्यताले हाम्रो संबन्धलाई एउटा छुट्टै मोडमा...
-भुवन पाठक / पर्थ, अष्ट्रेलिया भाई भाई लडेरै घर, ढल्यो भन्ने सुन्छु । सिमानामा रुवाबासी, चल्यो भन्ने सुन्छु ।।...
मार्च ४, २०१९
-महेन्द्र पौडेल गुहवाटीबाट रेलचढेपछि झुप्रा बस्तीहरु प्रशस्तै देखें रेलका लीग वरिपरी । ती झुप्रा बस्तीहरुमा मानिसहरु कसरी बस्दाहुन् ? झ्यालबाट ती झुप्राबस्तीबासीहरुको दैनिकी हेर्दा म भावुक बनेँ । फोहोरो पानी, वरीपरी जमेको छ । प्लाष्टिक र अन्य...
फ्रेब्रवरी २५, २०१९
-महेन्द्र पौडेल करिब बीस घण्टाको रेल यात्रापछि सिमलगढी स्टेशनमा उत्रेको थिएँ । किराझैं मानिसहरु यताउता गरिरहेँ । मैले आफ्नो चेहेरा खोज्नु थियो । आफ्नाहरु खोज्नु थियो । बाकाहरु खोज्नु थियो । बाले छाडेका यादहरुलाई पुनर्जागित गर्नुथियो ।...
“बा” की प्रेमिका
फ्रेब्रवरी १२, २०१९
-महेन्द्र पौडेल “ठ्याक्कै बाबु जस्तै रैछ” । मोटो बाक्लो सिसाको चश्मा लगाएकी । दुब्ली, गोरी । सेतै फुलेका, गुजल्टिएको केश । नसैनसा भएका पातला खिरिला र नरम हातले मेरो अनुहारलाई छामिन । अनि केशलाई स्पर्श गर्दै उनले...
गीत : देवताको बजार
डिसेम्बर ५, २०१८
-दिपक सुबेदी भगवान मेरो मन्दिरमा बस्छन मन अनी मस्तिस्कमा बस्छन भन्छन छ यहाँ देवताको बजार म मान्छु एक छन तस्विर हजार...
युगयुगसम्म अजर अमर महाकवि देवकोटा (११० औं लक्ष्मी जयन्ती विशेष)
नोभेम्बर ६, २०१८
-दीर्घराज प्रसाई लक्ष्मीपूजाको दिनमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा विक्रम संवत् १९६६ सालमा जन्मिएको हुनाले नेपाली साहित्य जगतले ज्ञानको पूञ्जका द्योतकका रुपमा भगवती सरस्वतीको पूत्रको रुपमा धनधान्यकी देबी तिहारको लक्ष्मीपूजाको दिनमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा अर्थात बालकृष्ण समको शब्दमा सरस्वतीप्रसाद देवकोटालाई नेपालले पायो...
मे २५, २०१८
तारा अधिकारी / स्पेन भैंसीको मुखबाट स्वात्त छिरेर मलखादमा पूग्ने पराल आज बाह्रघरे तानमा छिर्न भिजाईएको छ । अब हत्तासोको लगातारको ठ्यास ठ्यास उसले निर्वाद हरेक क्षण खप्नुपर्ने छ । उसका मेरुदण्डका हाड नै भाँचिनेगरि प्रत्येक तानको...
मार्च ११, २०१८
-कपिल अधिकारी / ताइपेइ , ताइवान थोपा टिल पिलाउँछ अभिमानी, स्वाभिमानी चल्छ तलमाथि दायाँबायाँ बेड नं ५ सि० ८ एनटियु अस्पताल उछिट्टिएर आएको थोपा कुन छेउबाट फुटेर कसरि पो बगेर कुन भुइँमा बिलाउँछ अस्ताउँछ अस्तित्व आकारबाट निराकारमा...
-भानुभक्त आचार्य सुमार्गीकोमा खाने कि? प्रसाईकोमा खाने कि ? महतोकोमा खाने कि ? चौधरीकोमा जाने कि ?...